Nivoaka iny ny fanapahana tamin` ny filankevitry ny minisitra farany teo fa mihato ny fampianarana na ho an` ireo mpanala fanadinana aza. Tsy tambo isaina ny olana mianjady amin` ny ray aman-dreny, ny mpanabe, ny mpianatra ary ireo tompon-tsekoly amin` izao. Ho an` ireo mpanala fanadinana ohatra, araka ve ny fandaharam-pianarana? Ho an`ireo sekoly tsy miankina indray dia efa misy lamina napetraka amin` ny famindrana kilasy mpianatra iray. Ireo enti-mody no hamaritana ny fari-pahaizana ireo mpianatra. Na dia eo aza ireo fepetra samihafa dia sarotra ny raharaha satria ny fandaharam-pampianara tsy vita ary ny fitsapana sy fanadinana tsy misy. Araka ny talen-tsekoly iray dia “mampanahy ny handraisana ireo mpianatra nandalo fialan-tsasatra mihoatra ny dimy volana. Hisy aloha ny fitsapana fahaizana rehefa miditra amin` ny taom-pampianarana vaovao izay mbola tsy voafaritra mihitsy”. Namafisiny fa “raha ny zavatra efa niainana teto Madagasikara ny taona 2002 dia ny taona 2004 vao niverina tamin` ny laoniny ny tetiandrom-pampianarana. Midika ve izany fa amin` ny taona 2023 vao hilamina ny fampianarana? Isika rahateo miditra tsikelikely amin` ny rafitra PSE”.